Train Travel Tips Archives | စာမျက်နှာ5၏ 14 | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား
10 သင်၏လက်ကိုခရီးဆောင်သေတ္တာ Organize စေရန်မည်သို့သိကောင်းစရာများ
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ခရီးစဉ်မည်မျှပင်သွားပါစေ - တနင်္ဂနွေကမ်းခြေအပန်းဖြေခရီးထွက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ သုံးပတ်ကြာဟိမဝန္တာတောင်တက်ခရီးဖြစ်လျှင် - သင်သည်မည်သည့်အရွယ်အစားအိတ်ကိုမဆိုထုပ်ပိုးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်, ပြီးတော့သင်မည်သို့စုစည်းရမည်ကိုသိလိုလိမ့်မည်, in this blog we will focus…
ရထားအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွား, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
5 နေ့အီတလီနိုင်ငံ Explore ရန်ရောမမြို့ မှစ. Trips
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ရောမမြို့တစ်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မြို့ဖြစ်၏, သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးခရီးသွားအမျိုးမျိုးတစ်နည်းနည်းမနှောမြော. ရှည်လျားသောအလုံအလောက်ကဧရိယာတဝိုက်ကြည့်ရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိလိမ့်မယ်စူးစမ်းဖို့ရောမမွို့ရှိနေဖို့သူများသည်, လွန်း. ကံကောင်းစွာ, ထိုနေ့ရက်သည်ခရီးစဉ်များအတွက်များမှာကားအဘယ်သို့! Considering how well…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားဘို့ဤအထိပ်တန်းသိကောင်းစရာများသင့်ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်လျော့ပါးကူညီသင့်တယ်. ပါစေရဲ့ကရင်ဆိုင်ရသောကြောင့်, သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပါသည်! သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှုင်, အိမ်မှာသို့မဟုတ်အခြားသူများရဲ့စောင့်ရှောက်မှု၌သင်တို့၏တိရိစ္ဆာန်များထွက်ခွာ၏အတွေးဖြစ်ပါသည်. Obviously no one…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ တိုက်ရိုက်လွှဂီတနှင့်အတူဘားဥရောပမှာနေရာတိုင်းပေါ်လာ, အချိုရည်များနှင့်သီချင်းများအခမဲ့စီးဆင်းရာသွက်အရပ်ဌာန၌အချိန်ကိုသတ်မယ့်လမ်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့. သင်သည်သင်၏ရထားခရီးစဉ်အတွင်းမြို့ပေါ်မှာအချို့သောပျော်စရာရှိသည်ဖို့ရှာနေခဲ့လျှင်, ငါတို့သည်အချို့သောအကြံပြုချက်များရရှိပါသည်. ဒီမှာပါ…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလူဇင်ဘတ်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ...
အားဖြင့် Jenn Hamann
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ပြည်ပမှာခရီးသွားတစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွေ့အကြုံများ၏ခန့်မှန်းရခက်ဖြစ်ပါသည်. သင်တစ်ဦးနိုင်ငံခြားပြည်သွားလာသည့်အခါ, သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ထိတွေ့ပါလိမ့်မည်, setting များကို, နှင့်အတွေ့အကြုံများ. သငျသညျအခြို့သောသုတသေနပွုရင်တောင်, သငျသညျအခြို့တို့ကအံ့အားသင့်အားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့သေချာပါသည်…
ရထားအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွား, ကားသွားလာရေးသိကောင်းစရာများ, ရထားခရီးသွားခြင်း, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ အသည်းအသန်ခရီးသွားများအတွက်ကကောင်းတစ်ခရီးစဉ်ရှိသည်ဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်သိကြ. မြေပုံမှာအကောင်းတစ်ဦးကြည့်နှင့်အတူ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ဦးအစိုင်အခဲအစီအစဉ်, နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့, အံ့သြဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများ - သင်သည်သင်၏အဘို့သတ်မှတ်ထားပါတယ် 10 ရက်ပေါင်းဆွစ်ဇာလန်ခရီးသွား. တဖန်သင်တို့ဥရောပမှတဆင့်ခရီးသွားလာနေသည့်အခါ, တစ်ဦး…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
10 ခရီးသွားနေစဉ်ငွေကို Save ရန်သိကောင်းစရာများ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ အဘယ်သူသည်လာသောအခါဖြစ်နိုင်သမျှပိုက်ဆံကယ်တင်လိုပါဘူး? ခရီးသွားလာစျေးကြီးရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့် Save ကိုတစ်ဦးကရထားနှင့်သင်၏ရထားလက်မှတ်ဝယ်ယူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီဖြင့်စီစဉ်နေဖြင့်, သငျသညျကုန်ကျစရိတ်ခေါ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်. ဤအနှင့်အတူခရီးသွားနေချိန်မှာပိုက်ဆံ Save 10 tips on your next vacation…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ခရီးသွားများအတွက်ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးတူးမြောင်းနှင့်မြစ်လှေအားလပ်ရက်ရှာနေဥရောပကြောက်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းများရှိပါတယ် သိ. လွယ်ကူသောငြိမ်ဝပ်စွာနေလို့ရပါတယ်. သို့သျောလညျး, ဘယ်မှာအစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံးရွက်အားလပ်ရက်များအတွက်သွားကြဖို့သိရန်, သငျသညျအခြို့သောသုတသေနပွုဖို့ရှိသည်. There are five countries with fantastic canal…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ...
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ငြိမ်းချမ်းစွာနှင့်ပျော်စရာ. မိဘများအနေဖြင့်သူတို့၏အားလပ်ရက်ခရီးသွားခြင်းအကြောင်းကိုကလေးများနှင့်ပြောဆိုသည့်အခါသင်ကြားလေ့မရှိသောစကားလုံးနှစ်လုံး. ဒါကြောင့်, မီးရထားဖြင့်ဥရောပမှကလေးများနှင့်ခရီးသွားခြင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်များကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်. There is just something about trains that calms children…
ထိပ်တန်း5ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးညပွဲလမ်းနှင့်အတူမြို့ကြီးများ
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ အဆိုပါမြင်ကွင်းများကိုမြင်ခရီးသွားလာတဲ့အကြီးအရှေးခယျြမှုဖြစ်ပါသည် - ဒါပေမဲ့သင်သာပျော်စရာရှိသည်ဖို့အဘယ်အရာကိုလိုလျှင်? ထိုကိစ္စတွင်, အကောင်းဆုံးကိုတွေကတော့နှင့်အတူမြို့ကြီးများရှိပါတယ်, နှင့်ရထားအဲဒီမှာရတဲ့လွယ်ကူပြီးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖြစ်ပါသည်. ပါတီတိရစ္ဆာန်များအဘို့, there’s nothing quite…
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားဆွီဒင်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ရထားခရီးသွားယူကေ, ...